Vashanu Apple TV 4 vhidhiyo ongororo | IPhone nhau
Mangwana iyo Chizvarwa chechina Apple TV kune vamwe vane rombo rekutanga vashandisi vane chokwadi chekuva nenguva yakanaka, sekune chero chinhu chitsva chishandiso, kuyedza zvinhu neyavo nyowani seti yepamusoro bhokisi. Vamwe vese vashandisi vanoita sekuti isu tichafanirwa kumirira kwenguva yakati rebei, asi isu tinogona kuzvinyaradza nekuona ongororo senge idzo dzakakwenenzverwa nevamwe vezvenhau vetekinoroji, kunyangwe ini ndisiri kunyatsojekesa kuti iri izano rakanaka ... kuti sezvazvingaita, pazasi une 5 mavhidhiyo ongororo kubva kuVerge, Mashable, USA Nhasi, Wall Street Journal uye CNET.
1 vava kuda
3 Shandisa Nhasi
Iyo Verge inotanga ongororo yayo nekutaura nezvayo Siri Remote, yemabhatani ayo, chimwe chinhu chisingavape kutamba kwakanyanya nekuti ine mabhatani matanhatu chete. Ehezve, ine zvakare ine yekubata pamusoro iyo inotibvumidza isu kufamba kuburikidza neTVOS sezvatinoita paIOS. Ivo vanosimbisa kuti iri 6% iOS uye kuti iyo interface, kunyangwe zvachinja zvakanyanya, ine basa rakafanana neiyo yeshanduro dzakapfuura.
Ivo zvakare vanoedza Siri, chimwe chinhu chinodaidzwa kuve chimwe chezvakanakisa maficha eiyo nyowani Apple TV, kunyangwe mamwe ongororo akatotaura kare kuti ndicho chinhu icho Apple ichigere kushanda. Chimwe chikamu chakakosha ndeye tvOS kusangana pamwe nezviri mukati masevhisi mukutenderera seNetflix, sezvo tichigona kuvatsvaga kubva mukutsvaga kwese uye, sekuvimbiswa, mhedzisiro yekutanga ichave iyo inowanikwa mahara.
Iyo Verge inotiratidzawo maitiro atinogona kutamba Asphalt 8 neSiri Remote, chimwe chinhu icho vazhinji venyu chamuri kutarisira. Ndichiri kurangarira ndichitamba Real Racing 2 nehama, iye neIpad yake uye ini neangu 4S. Zvirinani pane hombe screen.
Ongororo yeMashable yakanangana nekutiratidza mushandisi mushandisi sezvataizoiona dai taive nayo mumba yekutandarira. Zvine musoro, zvakare inotaura nezve Siri Remote, chimwe chezvinhu zvakakosha zvikuru zveApple TV 4 uye izvo hazvikundike mune idzi ongororo, asi usazvitende, kuti Apple ichine basa rakawanda mune izvi.
Mashable inotiratidzawo mutambo, asi uyu unonakidza kupfuura wepfuura, nekuti iwo mutambo watinoshandisa iwo controller senge raki tenisi nenzira imwecheteyo iwe yaunogona kuita neiyo Wii.
USA Nhasi, kune chikamu chayo, inotenda kuti mushure memakore matatu, vashandisi vanozokoshesa iyi vhezheni itsva yeApple TV. Asi kana tichida chimwe chinhu chakachipa kana kuti tichazotenga 4K TV munguva pfupi, zviri nani titarise zvigadzirwa zvinokwikwidza.
WSJ inotanga nekutaura nezvenhoroondo yeterevhizheni uye inovimbisa kuti Apple yakave neimwe pfungwa. Ivo vanovimbisa kuti ivo vagadzira iyo hofori iPhone, chimwe chinhu icho vazhinji vachabvumirana pane uye vamwe havazobvumirana zvakanyanya.
Zvinoenderana neWSJ uye ini ndinofunga isu tese tinobvumirana pane izvo, zano hombe rave rekusanganisira App Store paApple TV nyowani, sezvo tichizokwanisa kutamba natively, kuverenga tsamba, kufaya uye zvese zvatinogona kufungidzira (kana Apple ikasaramba) mune iri kure kure ramangwana. Kune izvi zvese, ivo vanotaura nezve kukosha kweiyo Siri Remote. Mumwe muenzaniso wavakafarira kugona kutaura "Ati chii?" kudzokera mumasekonzi mashoma.
Zvinoenderana neCNET, chinhu chakanaka nezveApple TV 4 ndechekuti inotipa iyo yakanakisa vhidhiyo ruzivo nakare kose mazuvano, nekuita nekukurumidza uye inoyevedza uye inozivikanwa interface panguva imwe chete. Ivo zvakare vanotenda kuti ine yakanakisa yekure kure kutonga kuripo mumusika uye kuti izwi kutsvaga rinokwanisa kuwana chero chinhu, chimwe chinhu chandisingazive kana ini ndichitenda mushure mekuverenga imwe wongororo.
Iyo yekudzikira, sekureva kweCNET uye chimwe chinhu vazhinji vedu chatinobvumirana pachiri, ndechekuti yake mutengo wakakwirira kupfuura kukwikwidza uye kuti hakuchina kunyorera kwakawanda, chimwe chinhu chine musoro Ivo vanogunun'una zvakare kuti hapana chishandiso chekuona izvo zvemukati zveAmazon, chimwe chinhu chinoita senge chine musoro kana tichifunga kuti ivo vari makwikwi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple tv » Vashanu Apple TV 4 vhidhiyo ongororo
Asi haina kuiswa mukutengesa muzvitoro zvepanyama mangwana, Chishanu 30?
Mhoro Vincent. Ehe, asi aya midhiya anokwanisa kuwana pamberi. Icho chikamu chekushambadzira.
Thanks Pablo, mangwana ndiri kuzotora 64 gig
Kana mangwana zvikaiswa mukutengeswa muzvitoro, saka preorder yaive yei?
Nhasi ndinowana gadget kuti isatombobuda mumba hehehe
Chinja yako iPhone ive drone nekuda kwefoniDrone Ethos